Isahluko 21. Ukufuna Iqiniso Kuphela Okuwukukholwa Ngeqiniso KuNkulunkulu | IBandla LikaNkulunkulu USomandla
Ekukholweni kwabo kuNkulunkulu, bonke abantu bangakhuluma ngezimfundiso, bathi, “Yonke imibono yethu ekukholweni kuNkulunkulu kumele ihlanzeke,” “Kufanele simlalele uNkulunkulu” “Kufanele sithande uNkulunkulu” “Kufanele siyenze ngobuqotho imisebenzi yethu,” “Akumele sihlubuke kuNkulunkulu,” futhi “Kumele siziqonde thina.” Nakuba sebekhulume kaningi ngalezi zinto, abaziqondi. Abakabi nakho ukuqonda kwangempela ngencazelo eyisisekelo salawa maqiniso. Uqonda kuphela amazwi asobala, hhayi incazelo yomoya noma ingaphakathi lamazwi. Ngakho, aninalo iqiniso ezinhliziyweni zenu. Kungenzeka ninokuqonda okungatheni, kodwa kusezingeni eliphansi kakhulu. Kulabo asebemnkantsha ubomvu bebandla abanolwazi oluthize, kuncane baqonda ezinhliziyweni zabo ngezinto ezilula, kodwa abakwazi ukuveza noma ukusebenzisa ukuqonda kwabo. Ngoba labo abasha ebandleni, bangakhuluma kuphela ngezimfundiso esithile futhi bashumayele ivangeli ukuze bazuze abantu, kodwa abaliqondi nhlobo iqiniso. Labo kini abafundile futhi abazi ngamasiko nabo abaliqondi iqiniso. Ungakubheki ukuqonda kwakho izimfundiso noma incazelo engokoqobo njengokuqonda iqiniso. Abanye asebekholwe kuNkulunkulu isikhathi eside, abanekhono elihle futhi abawuqonda kahle umoya, kungenzeka banolwazi oluncane ngeqiniso, kodwa noma kunjalo abanakusho ukuthi bayaliqonda. Lapho ukhuluma ngokuqonda, emishweni eyishumi oyishoyo mhlawumbe mibili enamazwi anokuqonda kweqiniso. Okunye okushoyo kuyimfundiso, kodwa uzwa sengathi manje ungakwazi—ungashumayela njalo ngosuku noma ngezinsuku eziningi nomaphi la uya khona, uhlale unokuthile ongakusho futhi akupheli. Lapho usuqedile, ufuna ukukuhlela kube incwadi, ikhophi bese uyisabalalisa, ube “usaziwayo okubhalwe ngokuphila kwakhe” okuthi, lapho isikhishiwe, uvumele abantu badle futhi baphuze la mazwi futhi lokhu kuyobazuzisa bonke. Abantu abanakulithola nhlobo iqiniso, uma beqonda kangcono baqonda incazelo engokoqobo. Uma bezihlomisile ngokwezinga elithile, ngenxa yokuthi bahlakaniphile futhi bakwazi ukukhumbula izinto, ngenxa yokuthi bavamise ukukhuluma ngomsebenzi kaNkulunkulu, ngokubaluleka kokuba senyameni, inkimbinkimbi yokuba senyameni, nezindlela nezigaba zomsebenzi kaNkulunkulu, bacabanga ukuthi bona sebelitholile iqiniso, ukuthi seliliningi kakhulu. Lokhu akunamqondo! Kufakazela ukuthi akekho kubo oqonda iqiniso. Manje abantu baqonda ezinye izimfundiso, abaziqondi bona siqu, ingasaphathwa eyokwakha umqondo. Ngokuqonda izimfundiso ezithile, bacabanga ukuthi sebeneqiniso, ukuthi khona sebeyizinto ezinkulu, futhi bayaphakama, bacabange: “Ngilifunde kaningi izwi likaNkulunkulu. Amanye amazwi ngiwakhumbula njengoba enjalo futhi ngiwafake enhliziyweni yami. Nomaphi la ngiya khona, uma ngiqala ukukhuluma ngingaqhubeka izinsuku, ngingakhuluma okuhlelekile futhi okucacile nganoma iyiphi ingxenye emazwini kaNkulunkulu.” Eqinisweni awuqondi lutho. Kungani kuthiwa awuqondi? Kolunye uhlangothi ukuthi anikwazi ukuxazulula izinkinga, anikwazi ukuthola umnyombo wazo, futhi anikwazi ukubona ngale kwesiqu sazo. Kolunye uhlangothi ukuthi, akunandaba ukuthi inkinga noma indaba iyini, ulwazi lwenu ngayo aluphelele futhi luyadida, aninakuyihlanganisa neqiniso.
Mayelana nombono wokukholwa komuntu kuNkulunkulu—indlela abantu abakholwa ngayo kuNkulunkulu, yini engabizwa ngokuthi “inkolelo,” hlobo luni lomuntu oyikholwa, hlobo luni lwabantu abanoNkulunkulu enhliziyweni yabo, ungawachaza kanjani amazwi athi “ukukholwa kuNkulunkulu,” ungaliqonda kanjani leli qiniso, hlobo luni lombono olubonisa ukuthi umbono womuntu ngokukholwa kuNkulunkulu ufanele, hlobo luni lombono olubonisa ukuthi umbono womuntu ngokukholwa kuNkulunkulu awufanele, futhi abantu kufanele bakholwe kanjani kuNkulunkulu—ingabe nike nacabanga ngalezi zinto? Nonke nibonakala niyizikhondlakhondla zeqiniso. Nike nacabanga ngokuthi yakhiwa yini inkolelo? Yiziphi izinto enizenza ekuphileni kwenu kwamihla yonke ezibonisa ukungabi nankolelo, yiziphi izinto ezenziwa yiwalo makholwa anenkolelo yangempela, yiziphi izinto ezenziwa yilabo abangakholwa, futhi ezintweni ohlangana nazo ekuphileni kwakho kwamihla yonke, yiziphi kuzo ezimayelana nokukholwa kuNkulunkulu futhi yiziphi kuzo ezingahlangene nokukholwa kuNkulunkulu—ungakwazi ukukhuluma ngalezi zinto ngokucacile? Uyiqonda ngempela incazelo yokukholwa kuNkulunkulu? Uyaqonda ukuthi hlobo luni lomuntu olunenkolelo yangempela, noma ukuthi hlobo luni lomuntu oluyikholwa langempela? Uyayiqonda incazelo yezidalwa ezidaliwe ezikholwa kuNkulunkulu? Lokhu kubandakanya imibono yokukholwa kuNkulunkulu. Abanye abantu bathi: “Ukukholwa kuNkulunkulu kuyinto enhle futhi kuyindlela efanele. Ukukholwa kuNkulunkulu kungcono kunanoma yiliphi ibhizinisi noma indlela yokuphila. Ukukholwa kuNkulunkulu kuyinto enkulu kakhulu ekuphileni komuntu.” “Ukwenza umsebenzi wakho ngenxa kaNkulunkulu kuyilapho ukholwa kuNkulunkulu kuwukubonakaliswa okungokoqobo.” “Inhloso yokukholwa kuNkulunkulu ukusindiswa.” “Ukukholwa kuNkulunkulu ngukwanelisa intando Yakhe.” Nonke nizishilo phambilini lezi zinto, akunjalo? Niwaqonda ngempela la mazwi? Cha, anikaze empeleni niwaqonde. Inkolelo yangempela kuNkulunkulu ayibandakanyi ukukholwa Kuye ukuze usindiswe futhi ingasaphathwa eyokuba umuntu olungile. Futhi ayikho mayelana nokukholwa kuNkulunkulu ukuze uthandwe abantu. Empeleni abantu akufanele babheke ukukholwa kwabo kuNkulunkulu njengenkolelo yokuthi uNkulunkulu ukhona, akukho okungaphezu kwalokho; akukhona ukuthi kufanele umane ukholwe ukuthi uNkulunkulu uyiqiniso, indlela, ukuphila, nanokuthi akukho okungaphezulu. Futhi akukhona ukuthi umane wazi uNkulunkulu, ingasaphathwa eyokuthi umane ukholwe ukuthi uNkulunkulu unguMbusi wazo zonke izinto, ukuthi uNkulunkulu unguSomandla, ukuthi uNkulunkulu wadala zonke izinto emhlabeni, ukuthi uNkulunkulu uhlukile futhi mkhulu kakhulu. Akukhona ukuthi umane ukholwe yileli qiniso; kunalokho intando kaNkulunkulu ithi sonke isiqu sakho nenhliziyo yakho kufanele kunikezwe uNkulunkulu futhi kuthobele uNkulunkulu, okungukuthi, kufanele ulandele uNkulunkulu, uvume ukuba uNkulunkulu akusebenzise, uzimisele ukumenzela umsebenzi, nokuthi kufanele wenze noma yini ngenxa kaNkulunkulu. Akukhona ukuthi nje labo abashiwo kusengaphambili futhi bakhethwa uNkulunkulu kufanele bakholwe Kuye. Empeleni, sonke isintu kufanele sikhonze uNkulunkulu, simthobele futhi simlalele, ngoba isintu sadalwa uNkulunkulu. Lokhu manje kuthinta indaba yesiqu. Uma uhlale ukhuluma ngezinhloso zakho ekukholweni kuNkulunkulu, uthi, “Asikholwa yini kuNkulunkulu ngenhloso yokuthola ukuphila okungunaphakade? Asikholwa yini kuNkulunkulu ngenhloso yokusindiswa?” sengathi ukukholwa kwakho kuNkulunkulu kufana nohlobo oluthile lodaba olungabalulekile, ukukholwa ngenxa nje yokuthola okuthile, ngakho lona akuwona umbono okufanele ube nawo ekukholweni kuNkulunkulu. Mayelana nawo wonke amaqiniso, abantu kufanele bafune, bazame ukuthola futhi baphenye ukuthi iyini incazelo yangaphakathi yeqiniso, indlela yokwenza ingxenye yeqiniso, nendlela okungangenwa ngayo kulo—lezi izinto abantu okufanele babe nazo. Kuzo zonke izingxenye zeqiniso abantu manje okufanele babe nazo, niqonda kuphela ingaphandle lemfundiso, okubonakala ngaphandle, anisiqondi isiqu seqiniso, njengoba ningakaze nisazi. Isibonelo: Kuneqiniso eliningi elisengxenyeni yokwenza umsebenzi womuntu, kuneqiniso eliningi futhi engxenyeni yokuthanda komuntu uNkulunkulu, nokuzazi, abantu kufanele baqonde iqiniso eliningi. Kuneqiniso eliningi ekubalulekeni nasemfihlakalweni bokuba sesimweni somuntu kukaNkulunkulu nakho okumele kuqondwe. Kuneqiniso eliningi elisezindabeni ezifana nendlela abantu okufanele bakhonze ngayo uNkulunkulu, okufanele baziphathe ngayo, okufanele balalele ngayo uNkulunkulu, okufanele bakwenze ukuze bahambisane nentando kaNkulunkulu nendlela okufanele bakhonze ngayo uNkulunkulu. Abantu bacabanga kanjani noma bazame ukuthola imibuzo yazo zonke lezi zingxenye zeqiniso? Kuneqiniso elijule kakhulu kuzo zonke lezi zingxenye, futhi kudingeka abantu bawazi. Uma ungawazi, ukhuluma kuphela ngokubonakala kwamazwi, ungawatholi noma wazi ukujula kwawo, uyohlale uphila ekubonakaleni kwamazwi, futhi ngeke ukwazi ukushintsha.
Lapho abantu abajwayelekile bephawula ngani nina eningabaholi, nithi: “Mmh, yini ekwenza ufaneleke ukuphawule ngami? Zingaki izintshumayelo ongazishumayela? Kungakanani ongakukhuluma? Bangaki abantu ongabahola? Yini ongayenza?” Kuba sengathi niyafaneleka. Uma uqhubeka kanje uzongena enkingeni; ungakhonza isikhashana kodwa uzogcina ungene enkingeni. Ngokwenu nonke, uma amabandla endaweni enikelwa kini futhi engekho owengamela nina izinyanga eziyisithupha, niqala ukuphambuka. Uma engekho onengamelayo unyaka, nibaholela kude futhi nibaphambukise. Uma kudlula iminyaka emibili engakabi bikho okuqondisayo, uletha labo bantu phambi kwakho. Kungani kunjalo? Nake nacabanga ngalo mbuzo? Ngitsheleni ningakwazi ukuba njena? Ulwazi lwenu lungakwazi ukusiza abantu isikhashana nje. Ngokuhamba kwesikhathi, uma uqhubeka usho into efanayo, abanye abantu bazokwazi ukubona; bazothi awuzinzile kakhulu, untula kakhulu ekujuleni. Akukho ongakwenza ngaphandle kokuzama ukudukisa abantu ngokukhuluma izimfundiso. Uma uhlale uqhubeka ukhuluma kanje, labo abangaphansi kwakho bazolandela izindlela, izinyathelo nesibonelo sokukholwa kuNkulunkulu nokwazi, futhi bazokwenza lawo mazwi nezimfundiso, ekugcineni, njengoba ukhuluma ngale ndlela, bayosebenzisa wena njengesibonelo. Ukhuluma izimfundiso, lapho uhola abantu, futhi labo abangaphansi kwakho bazofunda izimfundiso kuwe, futhi njengoba izinto ziqhubeka uyobe uthathe indlela engafanele. Labo abangaphansi kwakho balandela indlela yakho, futhi bonke bafunda kuwe bese belandela wena, ngakho uyacabanga: “Nginamandla manje; ngakho abantu abaningi bayangilalela, izwe lizwa ngami.” Le mvelo yokukhaphela okukubantu unganakile kukwenza uphendule uNkulunkulu umenze inhloko engelutho, nawe uqobo ube usuzakhela ihlelo thizeni, iqembu thizeni. Avela ngale ndlela amahlelo ahlukahlukene. Buka abaholi bawo wonke amahlelo. Bonke banenkani, bazenza osiyazi, bachaza iBhayibheli ngaphandle komongo walo nangokwemicabango yabo. Bonke bancike eziphweni nasolwazini olunzulu ukuze benze umsebenzi wabo. Ukube akukho ababekwazi ukukushumayela, ingabe labo bantu bebeyobalandela? Ngemva kwakho konke, kukhona abakufundayo, futhi kuncane abangakusho ngemfundiso, noma ukwazi indlela yokunqoba abanye nendlela yokusebenzisa obunye ubuqili, abalethe ngakho abantu phambi kwabo futhi babakhohlisa. Ngokulindelekile, labo bantu bakholwa kuNkulunkulu—kodwa eqinisweni balandela abaholi babo. Uma behlangana nalabo abashumayela indlela yeqiniso, abanye kubo bayothi, “Kudingeka sixhumane naye ngokukholwa kwethu kuNkulunkulu.” Badinga imvume yomuntu othile ukuze bakholwe kuNkulunkulu; akuyona yini inkinga leyo? Baphenduke ini labo baholi? Ingabe abakabi yini abaFarisi, abelusi bamanga, abaphikikrestu, nezikhubekiso ekwamukeleni kwabantu indlela yeqiniso? Lolu hlobo lwabantu lufana noPawulu. Kungani ngisho lokhu? Izincwadi ezabhalwa uPawulu cishe ezeminyaka eyizinkulungwane ezimbili edlule, futhi ziyiveza yonke iNkathi Yomusa. Bonke abantu badla futhi baphuza la mazwi akhe, bawabheka njengento ejwayelekile, njengokuhlupheka, ukuyala umzimba womuntu, nokuthola umqhele wokugcina wokulunga. Abantu bakholwa kuNkulunkulu ngokuhambisana namazwi akhe nezimfundiso zakhe. Ingakanani intando kaNkulunkulu abantu abangayiqonda phakathi neNkathi Yomusa? Ngaphezu kwalokho, labo abalandela uJesu ngaleso sikhathi babebancane, futhi babebancane kakhulu ababemazi—ngisho nabafundi Bakhe abaningi empeleni babengamazi. Umuntu ngeke asho ukuthi ukukhanya okuncane umuntu akuthole emakhasini eBhayibheli kumele intando kaNkulunkulu. Ingasaphathwa eyokuthi ukukhanya okuncane kusho ukuqonda uNkulunkulu. Abantu banenkani futhi bayaziqhenya futhi abanaye uNkulunkulu ezinhliziyweni zabo. Ngokuqonda imfundiso okuncane, bayazibekela futhi bakhe imibuso eminingi. Ngenhlanhla, leyo kwakuyiNkathi Yomusa futhi uNkulunkulu wayengaqinisile isandla kumuntu; onke amahlelo egameni likaJesu asetshenzwa uMoya oNgcwele, futhi konke kwenziwa uMoya oNgcwele ngaphandle kwalapho kwakwenziwa khona umsebenzi wemimoya emibi, ngakho iningi labantu lalisajabulela umusa kaNkulunkulu.
Akunandaba ukuthi bewulandela omunye umuntu noma ukuthi awuyanelisanga intando kaNkulunkulu ngenkathi ngaphambili ukholwa kuNkulunkulu, kumele uze phambi kukaNkulunkulu kulesi sigaba somsebenzi wezinsuku zokugcina. Uma uqhubeka ulandela umuntu othile ngenxa yokwazi lesi sigaba somsebenzi, khona-ke ngeke usathethelelwa, kuyoba njengoPawulu. Kusukela ekuqaleni, ngasebenzisa uPawulu noPetru baba izibonelo. Kungani? Lezi izindlela ezimbili ezihluke kakhulu. Uma othile ekukholweni kwakhe kuNkulunkulu engahambi endleleni kaPetru, angahamba endleleni kaPawulu. Lezi ukuphela kwezindlela ezimbili. Akunandaba ukuthi uwumlandeli noma uwumholi, konke kuyafana. Uma ungahambi endleleni kaPetru, kusho ukuthi uhamba endleleni kaPawulu. Kuyinto engagwemeki futhi ayikho indlela yesithathu ongahamba kuyo. Uma abantu bengayiqondi intando kaNkulunkulu, bengamazi uNkulunkulu, bengafuni ukuqonda iqiniso futhi bengakwazi ukumqonda ngokucacile uNkulunkulu, ekugcineni kufanele kube njengakuPawulu. Uma ungafuni ukwazi uNkulunkulu, ungafuni ukuqonda intando kaNkulunkulu, kodwa funa kuphela ukukhuluma nokuzihlomisa ngezimfundiso, yileyo ndlela ongamenqaba futhi umkhaphele ngayo uNkulunkulu, ngoba imvelo yomuntu yenqaba uNkulunkulu. Lezo zinto ezingahambisani neqiniso nakanjani zivela entandweni yomuntu. Umuntu akanakusho ukuthi azikabi zimbi kakhulu, ngaphandle kokungahambisani kwazo neqiniso. Abanye bathi: “Nakuba lezi zinto zingenziwa ngokuhambisana neqiniso, angikacabangi ukuthi zenqaba uNkulunkulu.” Uma wenza noma yini engahambisani neqiniso, nakanjani uzomenqaba uNkulunkulu. Uma kungenziwa ngokuhambisana neqiniso, khona-ke kwenziwa ngokuhambisana nezimfundiso nentando yomuntu. Kuqubuke kuSathane noma entandweni yomuntu. Lokhu kuhlaza uNkulunkulu. Labo abangalifuni iqiniso, nakuba bekholwa kuNkulunkulu, abakwazi ukulalela uNkulunkulu, abakwaziyo nje ukumenqaba.
Okwedlule：Isahluko 19.Incazelo Yokuzwa KukaNkulunkulu Ubuhlungu Bomhlaba
Okulandelayo：Isahluko 23. Indlela Yokuqonda Ubunye Benyama Nomoya KaNkulunkulu
UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele VIII Ukububula KukaMninimandla Onke Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe I Umsindisi Usebuyile “Esefwini Elimhlophe”